Xeer ilaalinta oo laga sugaayo maanta cadeymo ku filan kiiska Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Xeer ilaalinta oo laga sugaayo maanta cadeymo ku filan kiiska Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur
December 20, 2017 Cali Yare476
Kadib markii shalay gabal dhicii maxkamadda Gobolka Banaadir la geeyay Siyaasiga C/raxmaan C/Shakuur Warsame oo dowladda Somaliya ku eedeysay inuu maleegayay arrimo ka dhan ah dowladnimada, ayaa maxkamadda Gobolka Banaadir waxa ay dalbatay in la keeno cadeymo ku filan eeda loo jeediyay Siyaasigan.
Xafiiska Xeer ilaalinta Somaliya ayaa laga dalbaday muddo 24 saac gudahood inay ku keenaan cadeymo ku filan kiiska Siyaasi C/raxmaan C/Shakuur Warsame, maadaama eedeyntiisa ay tahay mid culus.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in xafiiska Xeer ilaalinta uu dalbaday muddo shan cisho ah oo maxkamadda lagu horkeynaayo cadeymaha, balse laga diiday oo waqti ahaan la siiyay in cadeymaha lagu keeno muddo 24 saac gudahood.
Qareenada u doodaya C/raxmaan C/Shakuur Warsame ayaa ku doodaya hanaanka loo maray soo qabashadiisa inay tahay mid sharcidaro ah, marka la eego weerarka hoygiisa lagu qaaday Siyaasigaan.
Maanta oo lagu madalsan yahay maxkamadda Gobolka Banaadir in dib la isugu soo noqdo ayaa waxaa la sugayaa in la horkeeno Cadeymaha eedeynta C/raxmaan C/Shakuur Warsame.
Hadal haynta Bulshada ayaa noqotay Kiiska C/raxmaan C/Shakuur, waxaana si wayn indhaha loogu haayaa Maxkamadda Gobolka Banaadir iyo maanta waxa ka soo bixi doona, maadaama la sugaayo cadeymaha kiiska Siyaasigaan.
Sharciga Somaliya u yaalla ayaa dhigaya haddii muwaadin Somaliyed la soo eedeeyo inuu helo garsoor cadaalad ah, sidoo kalena wax ka badan 48 saacadood inuusan xirnaan Karin, haddii aanan loo baahan waqti dheeri ah.
Booliska Somaliya oo maanta u dabaaldagaya sano guuradii 74-ad
Munaasabad Mahad celin ah oo xalay Cadaado loogu qabtay Odawaa iyo Mahad Salaad (Sawirro)